Kungani Ungazi Ukuthi Ngingubani? | Martech Zone
Kubalulekile ukubeka phambili amathuba ethu wokumaketha ukuqinisekisa ukuthi sithola amakhasimende afanele. Uma sisayina amakhasimende angafanele, sazi ngokushesha ngoba ukukhiqiza kwethu kusale, amanani emihlangano ayanda, futhi ukukhungatheka okuya ngokuya kungena ebudlelwaneni. Asikufuni lokho. Sifuna amaklayenti aqondayo inqubo yethu, azise ubudlelwano bethu futhi abone imiphumela esiyitholayo.
Namuhla ntambama bekufanele ngenze ucingo kumngane wami nozakwethu, UChad Pollitt kwaKuno Creative. I-Chad inobudlelwano obuhle nomthengisi omkhulu esifuna ukuthenga kuye. Ngokufinyelela kwebhulogi yethu, ubudlelwano obuseduze esinabo nemboni yabo, namakhasimende abalulekile esinawo… Ngiyaqiniseka ukuthi abaholi enkampanini yabo bangakwazisa ukwenza ibhizinisi nathi.
Ngeshwa, bane-inboarding process edinge ukuthi ngikhulume nomuntu othengisayo, ngiphendule imibuzo eminingi yokufaneleka, ngikhulume nomphathi wesiteshi, ngibuke amavidiyo ambalwa athunyelwe umphathi wesiteshi, ngiphendule kuspredishithi esinemibuzo ecishe ibe ngama-50… futhi uNkulunkulu uyazi ukuthi yini elandelayo.
Abazi ukuthi ngingubani?
Angisho ukuthi ku-egocentric jerk uhlobo lomqondo. Ngikhathazekile ngokweqiniso ukuthi empeleni angazi ukuthi ngingubani! Inhlangano yabo ikhulile… njengenqubo yabo… futhi manje sebenabantu abaningi ngaphakathi enkambisweni yabo yokuthengisa abangajwayelene nale mboni kangangoba abazi ukuthi nginegama elihle nedumela phakathi kuyo. Angikholwa ukuthi nabo bazinike isikhathi babheka. Ngimane ngiyenye inombolo kumngcele wabo wokuthengisa.
Ngikhungathekile ngoba ngisebenze kanzima ukwakha ukuqashelwa kanye nokulandela okukhulu enginakho. Angiyena uSteve Jobs… kepha ngaphakathi kwemboni yabo encane, ngiyaqiniseka ukuthi ngivelela kubantu abaphezulu abangama-25 abakuqondayo abazama ukukufeza, bakhulume ngakho, futhi babelane ngakho. Ibhulogi yethu inokufinyelela okukhulu ngaphakathi imboni yabo, kepha abantu abakwinqubo yabo yokuthengisa abakhohlwa.
Lesi yisibonelo esihle sokuthengisa inqubo ihambe kabi. Into yokuqala engiyenzayo lapho inkampani ingithinta ngebhizinisi engingaba nalo ukuyocwaninga. Kwesinye isikhathi senza ibhizinisi ngoba bazoba iklayenti elihle… kepha izikhathi eziningi senza ibhizinisi ngoba kuzoba yithuba elikhulu kithi!
Cishe angizukugcwalisa ispredishithi. Ngizolinda kuze kube yilapho oxhumana naye uChad ebona ukuthi bangathanda yini ukubambisana nomunye umholi kule mboni. Kungadumaza uma bengakwenzi selokhu ngihlale kwidemo futhi ngabona amathuluzi engingawasebenzisela amaklayenti ethu… kodwa uma bengathanda ukungifaka enkambisweni yezinyathelo ezingama-42 ukungikhipha esikhundleni sokuqonda ukuthi ngingubani, mina Angiqiniseki ukuthi ngifuna ukwenza ibhizinisi nabo.
Yonke into eyenziwa yibhizinisi akufanele iphonswe enqubeni. Izinqubo zilungele imishini, kepha abantu bayakwazi ukucabanga futhi benze izinqumo ezinqumayo ezingalingani ngaso sonke isikhathi kunqubo. Amathemba akho akuwona okufakiwe kuspredishithi… bangabantu bangempela. Kufanele ube nokuhlukile kukho konke okwenzayo… kusuka kumugqa wesikhathi, ukwenza isabelomali, kuya kuzinsizakusebenza ezisetshenzisiwe. Ngifuna wonke umuntu abe ngelinye lamathemba ami afanele ezwe sengathi ngiyaqonda bangobani, kungani zibalulekile, Futhi singabasiza kanjani.
Lo mthengisi kufanele futhi.
Tags: marketing kwangaphakathilungiselelathola imikhondoUkunika Amandla Ukuthengisainqubo yokuthengisa
Ngo-Apr 27, i-2012 ku-8: 14 AM
UBravo Doug! Ngimusha kubhulogi yakho futhi kuze kube manje ngithola imininingwane yakho ibaluleke kakhulu. Ngiyavumelana nawe, kwesinye isikhathi ama-bots adinga ukubekelwa eceleni futhi ibhizinisi liqhutshwa amaqembu afanele. isikhathi.
Ngo-Apr 27, i-2012 ku-10: 11 AM
Inqubo ibalulekile. Imvamisa kusiza umthengi nomthengisi. Kepha, kwesinye isikhathi kudinga ukubekwa eceleni kuvune ingxoxo. Ingxenye ebalulekile yokuthengisa ukwazi ukuthi kufanele uhlukane nini nenqubo bese ukhuluma nje nabantu.
Futhi ngavuma ukuthi 'ucwaningo lubucayi'. Hlala wazi ukuthi ukhuluma nobani.
Siyabonga ngempendulo, uDouglas. Sizosebenzisa impendulo yakho.
Ngo-Apr 28, i-2012 ku-3: 47 AM
Okokuqala lapha futhi kumnandi ukwazi ngawe lapha. Konke okubhale lapha kuzwakala kukumema
futhi iyafundisa. Ngilokhu ngibuya lapha.
Jun 25, 2012 ku-1: 03 PM
Ukuthi ubhekisa ekukhuleni kwebhizinisi noma i
ukuqaliswa kobuchwepheshe obusha, noma yikuphi kunomthelela wokwehlisa isithunzi futhi
kugcizelela ubudlelwano phakathi komuntu nomuntu. Futhi kumakethi ngempela
Inzuzo yabaphathi ukuthola indlela yokugcizelela umuntu nomuntu
ubudlelwano, ngaphandle kosayizi wenkampani nohlobo lobuchwepheshe yena noma
Endaweni yangakithi yezinsizakalo zobungcweti, uma ngingahlakuli
ubudlelwane nomthengi, noma ngabe ngiyahlinzeka ngezinsizakalo enkampanini enkulu
noma encane, imvamisa angizukufeza ukuthengiswa kwalezo zinsizakalo. Kuyinto
akuvamile kakhulu ukuthi ngizovele ngigcwalise ifomu, nginike uhlu lwemibuzo, ngenze inhlolokhono
bese uthola iphrojekthi. Akuvele kwenzeke emugqeni wami wokusebenza; bekulokhu kunjalo
mayelana nobudlelwano. Kimi, wonke amakhasimende kufanele azizwe sengathi uyazi ukuthi ngubani
kunjalo. Lobo budlelwano. Futhi uma ungakwazi ukuthola indlela yokwenza
amakhasimende azizwa ekhethekile, uzolahlekelwa ibhizinisi.
UDavid S. Jackson
UCarlile Patchen noMurphy LLP